Hevitra 3 deco hanamboarana ny trano amin'ny fararano | Bezzia
Tony Torres | 04/09/2021 16:00 | an-trano
De nuevo Manakaiky ny fararano ary miaraka aminy, ny fianjeran'ny ravin'ny hazo, ny loko mavo sy mena, ny fofon'ny orana sy ny tolakandro izay manomboka mipoitra ny cool. Apetraka tsikelikely ireo zavatra eny amoron-dranomasina ary tonga ny fotoana hitsenana ny vanim-potoana tantaram-pitiavana indrindra amin'ny taona. Misy zavatra mampionona kokoa ve noho ny mody rehefa avy tontolo andro ary mandry eo amin'ny farafara miaraka amin'ny lamba firakotra hijerena fahitalavitra?
Eny, satria tonga ny fotoana fanomanana ny trano amin'ny andro fararano, dia hataontsika amin'ny fikasana rehetra izany. Miaraka amin'ireto hevitra deco ireto mba hanomezana tendron'ny fararano ny tranonao, Tsy ho voamarikao intsony ny aretina aorian'ny fialantsasatra aorian'ny fahavaratra. Satria ny fanaingoana ny trano dia manampy anao ho falifaly kokoa, indrindra raha tsotra izany ary tsy ilaina ny manao fampanjariam-bola lehibe.
1 Hevitra fall deco ho an'ny trano
1.1 Ny loko
1.2 Ireo sela
1.3 Voninkazo mianjera
Hevitra fall deco ho an'ny trano
Ny tranon'olona dia tokony ho tempoly, toerana hahitana fiadanam-po sy toerana miala sasatra isan'andro aorian'ny fitsangatsanganana isan'andro. Miaraka amin'ny hafetsena haingon-trano azonao atao ho sambatra kokoa ao an-trano Ary raha ampifanarahinao amin'ny vanim-potoana tsirairay dia ho afaka mankafy ny fahatsapana fanavaozana isaky ny vanim-potoana vaovao ianao.
Fanampin'izany, ny lokon'ny fianjerana dia mampionona tokoa ka ny fampidirana azy ireo amin'ny haingon-trano dia hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa ao anatin'ny rindrinao efatra. Mariho ireto hevitra deco manaraka ireto hamenoana ny tranonao amin'ny majika amin'ny fararano. Miaraka amin'ny famoronana kely sy fampiasam-bola kely indrindra, ianao dia afaka manome rivotra havaozina tanteraka ho an'ny tranonao mandritra ny vanim-potoana vaovao.
Ny loko no tena manova trano indrindra ary miaraka amin'ireo singa haingon-trano dia azonao atao ny manova tanteraka ny endrika efitrano. Raha amin'ny fahavaratra, ny antso dia ny loko turquoise, ny mavo ary ny tonony izay misy ifandraisany amin'ny ranomasina sy ny morontsiraka, amin'ny fararano dia tonga ny volontsôkôlà sy mena ary voantsinapy. Tsy mila mandray an-tendrony an'ity hevitra ity ianao, azonao atao fotsy ny rindrinao mandavantaona ary ampio singa kely hanovana ny ravaka.
Tsy mila mampiasa vola amin'ny haingon-trano akory ianao, satria lamba firakotra ihany no ilainao, mandoko ny lokon'ny fararano ary asa tanana kely ao an-trano. Mamorona sary hosodoko manokana, manangona ravina amin'ny hazo amoron-dàlana ary ampiasao izy ireo mba hamoronana singa haingon-trano tokana, manokana ary tsy lafo hamenoana ny tranonao amin'ny fararano.
Lamba firakotra eo amin'ny seza, ondana vitsivitsy izay misy singa mahazatra mianjera toy ny ravina na loko mena. Ny lamba rehetra dia hanova tanteraka ny endrika ao an-tranonao ary tsy mila mandany vola amin'ny undrouilles, lamba firakotra na ambain-drindrina vaovao ianao. Miaraka amin'ny faharetana kely dia afaka mamorona haingon-trano ny tenanao, ho fanampin'izany, voaporofo fa miala sasatra ny fanjairana ary manampy anao hifantoka sy hitazona ny adin-tsaina.
Amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona dia tsara ny manana voninkazo ao an-trano, ny fisehoana, ny fofona na ny loko dia manome tombony betsaka ka izany dia antsipiriany fototra amin'ny haingon-trano rehetra. Amin'ny maha hevitra deco fararano azy, tsy misy kilasika kokoa noho ny voninkazo maina miloko izay hamenoana lovia manitra ny lovia iray, vazy na fitoeram-bokatra voaverina. Ny felam-boninkazo maina dia manampy fikitika antitra sy tantaram-pitiavana mendrika ny karatra faran'ny fararano tsara indrindra. Manampia latsaka vitsivitsy amin'ny esory tianao indrindra ary hanana freshener rivotra mety tsara koa ianao.
Araraoty ny fanovana vanim-potoana hanaovana fanadiovana tanteraka ary esory izay rehetra tsy ampiasainao intsony, tsy mila ary tsy mahasambatra anao. Ireo zavatra rehetra miangona manodidina ny trano ireo dia manimba ny filaminanao fotsiny. Ampiharo ny fisintahana ary esory ao an-tranonao (sy ny fiainanao) izay rehetra tsy mandray anjara intsony, amin'izay dia afaka manome toerana ho an'ireo zava-baovao rehetra izay tsy isalasalana fa ho avy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Hevitra 3 deco hanamboarana ny trano amin'ny fararano
Ahoana ny fihinanana gliosida kely isan'andro